I-Awesome Things Brands yakwenza kuSocial Media ngo-2013 | Martech Zone
Okungafani iqaphe okwenziwa nsuku zonke emaphepheni ezinkundla zokuxhumana emikhiqizweni emikhulu engaphezu kwama-6,000 evela emikhakheni engama-30 ukusiza imikhakha ihlaziye izimbangi, ukusebenza kwebenchmark nokuncintisana ngokukhalipha. I-Unmetric ithuthukise umkhakha wokuqala owaziyo ezokuxhumana amaphuzu ebhentshini ngamamethrikhi angaphezu kwama-20 wokulinganisa nobungako bokubeka umaki wakho kumncintiswaneni wakho.
Yize izinkulungwane zemikhankaso zakhishwa kuzinkundla zokuxhumana eziningi ngo-2014, i-Unmetric yahlungwa ngezinkulungwane zemikhiqizo futhi yathola imikhankaso emihle kakhulu, ama-tweets, amavidiyo nama-stunts… okufaka konke kule infographic. Chofoza ku-infographic ukuthola eminye imininingwane ngemikhankaso kubhulogi le-Unmetric.
Feb 4, 2014 ngo-12: 24 AM
Sawubona Douglas, ngiyabonga kakhulu ngokufaka i-infographic yethu, ngijabule kakhulu ngokuthi uyithandile! Kuthathe umzamo omkhulu womuntu ukuhlanganisa konke ngoba ukhohlwa nje ukuthi mingaki imikhankaso emikhulu eyenzeka unyaka wonke, lapho nje besicabanga ukuthi sesiqedile, besizodonsa omunye umkhankaso. Ukukala uhlu kuthathe unomphela, ingxenye yokwakhiwa ibilula impela! Ngabe unentandokazi yakho yangonyaka odlule?
Feb 4, 2014 ngo-5: 30 PM
Impela - Ship My Pants kwakuyintandokazi. Hhayi ngenxa yobufebe kodwa ngoba bekuwumkhiqizo wakudala odidizelayo owenza okuthile okuyingozi NGEMPELA. Namanje ngiyayihleka.
Feb 5, 2014 ngo-1: 32 AM
Ngabe ubonile ukuthi iDickensian yabo ithatha i-Ship My Pants? "Kusizakale kakhulu"… kungenze ngahleka. Ifilimu yeLexus instagram ibinobuhlakani bangempela, ngizwe ukuthi bekufanele nakanjani bathole imayela elingaphezulu kuyo. UZraft Guy kaKraft washaywa izintokazi ehhovisi lethu futhi wafakwa naphezu kwemibhikisho yabasebenzi besilisa!